နန်ဝမ့်ဝှာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
နန်ဝမ့်ဝှာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd မှ Wangcun မြို့အနီးထုတ်လုပ် R & D ကိုအထူးပြုနဲ့ချီတက် 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်တောင်စက်ရုံ, မြောက်အမေရိက Ring ကိုလမ်းမတွင်တည်ရှိသည်ထားတဲ့ Air-con & ရေခဲသေတ္တာများအတွက်ကြေးနီပိုက် fittings စျေးကွက်သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး Gaowan, Xinxiang စီးတီးတရုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်ဦးကွေး, ကြေးနီ Tee & tripod ဖြစ်ကြပြီးပိုက် welded ။ ဦးကွေး၏စွမ်းရည်တစ်လလျှင် 20 ကျော်သန်း၏, ကြေးနီ Tee များ၏စွမ်းရည်တစ်လလျှင်ထက်ပိုမို5သန်းဖြစ်၏နှင့် tripod ကွေး၏စွမ်းရည်တစ်လလျှင်ထက်ပိုမို3သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကြေးနီ Tee & tripod ကွေး၏သည့်နည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ်သည်လောကရှိထူးခြားသောသည်နှင့်တီထွင်မှု5မူပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကလျှောက်ထားသုံးထုတ်ကုန်အထက်တွင်အပေါ်အခြေခံပြီးပင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကမ္ဘာတဝှမ်းဟာအတည်ပြုအလုပ်သမားကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်စိမ်းလန်းတဲ့မူဝါဒများအောက်ရှိ tripod ကွေး & ကြေးနီ Tee ၏ပံ့ပိုးပေး၏ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းအာမခံသည်, ထိုသို့သော Gree / Medi / aux / HAIER အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးနှင့်အရည်အသွေး၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာ / HISENSE စသည်တို့ကို
ကျော်ကို3နှစ် '' လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနှင့်အတူကျနော်တို့ 400 န်ထမ်း,4ထုတ်လုပ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားသာချက်များအပေါ်သန်း 52 နှင့် ပတ်သက်. dollars.Depending ဖြစ်ပါတယ်အတူရင့်ကျက်လုပ်ငန်းဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီ Air-အခွအေနေထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်နည်းပညာကိုရင့်ကျက်, ဝမ့်ဝှာပုအဆင့်ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူထိပ်တန်းဤမြေကွက်၌သုံးလည်းတရုတ်မြောက်ဘက်တွင်အအေးနှင့် Air-ခွအေနအေအစိတ်အပိုင်းများအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာတယ်။
"ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရိုးသားမှုကိုအစဉ်အမြဲရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဖောက်သည်နေပါစေ" ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအယူအဆမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလိုက်နာမှုသဘောတရားအဖြစ်တိုင်းဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံကြာပါသည်။ ကျနော်တို့ပြီးနောက်-ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကိုစုံလင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားတရုတ်နိုင်ငံတွင် about10 ပြည်နယ်များအတွက်ရုံးများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များနှင့် set up ရေရှည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Gree, Midea, Haier, aux, TCL, Meiling ရေခဲသေတ္တာ, Hisense, Frestech, မစ်ဆူဘီရှီ Dalian အဖြစ်ကျော်ကြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနှင့်တည်ငြိမ်သမဝါယမဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ထားကြပြီ စသည်တို့ကို LG ကကုန်သည်များမှတဆင့် Panasonic က,
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတဖြည်းဖြည်း IPO ရန်မျှော်လင့်အရေးကြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအကျိုးရှိအရင်းအမြစ်များကိုအာရုံကဘုံနှင့်စကေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတလမ်းသို့နင်းဖြစ်ပါတယ် ,. ကြှနျုပျတို့သညျ "oriented လူတွေ, နည်းပညာဦးဆောင်နှင့်အရည်အသွေး uppermost" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတန်ဖိုးများကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီး, စဉ်ဆက်မပြတ်ပိုကောင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုပြီးအချိန်မီဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း core ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ , အနာဂတျအတှကျအသစ်ကမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်၏မစ်ရှင်ကိုင်ပြီးရှည်လျားအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်နဲ့အတူရှေ့ဆက်နင်းနှင့်ပိုပြီးအံ့ဖှယျအမှုကိုဖန်တီးရန်ပြင်ဆင်နေသူအပေါင်းတို့သည်ဝမ့်ဝှာထမ်း။
Wangcun မြို့နှင့် Gaowan တရုတ်နိုင်ငံ Xinxiang စီးတီးအနီးရှိတောင်စက်ရုံ, မြောက်အမေရိက Ring ကိုလမ်း, ။
© Copyright - 2019-2020 : All Rights Reserved. အသားပေးထုတ်ကုန်များ- မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Copper Pipe Nipple Fitting, Air Conditioning Copper Pipe Fitting, 45 Degree Copper Pipe Fitting, Compressor Copper Tube, Y Tee Copper Pipe Fitting, Air Conditioner Copper Pipe Fittings,